Izikhumulo ze-IPhone | Izindaba ze-IPhone
Ama-terminals we-IPhone Kunezinto eziningi emakethe, yize kuphela eziphambili kakhulu zivame ukujabulela izinhlelo zokusebenza ezinamandla kakhulu noma izici zakamuva ezifakiwe ku-iOS, uhlelo lwayo lokusebenza. Kusukela ngo-2007, kuphume izizukulwane eziningana zefoni yakwa-Apple: I-EDGE, 3G, 3GS, 4, 4S futhi, imodeli yakamuva ezovela, ifayela le- iPhone 5 enikezela ngomzimba we-aluminium unibody nesikrini esingamayintshi amane, esidlula okokuqala ngqa ama-intshi ayi-3,5 ejwayelekile esasibonile kuze kube yileso sikhathi.
Imininingwane yosayizi besikrini abasha be-iPhone 14 Pro kanye ne-14 Pro Max
Por U-Angel Gonzalez kwenza Izinsuku ze-6 .
Amahemuhemu mayelana nemiklamo emisha ye-iPhone 14 ayi-oda losuku. I-tonic ...
I-iPhone 14 Pro izoba nomklamo oyindilinga kakhulu kune-iPhone 13
I-iPhone 14 isezindebeni zawo wonke umuntu emasontweni asanda kwedlula. Idizayini yayo entsha engase ibe khona kanye nezinto ezintsha...
I-iPhone 14 izoletha ukuthuthuka okubalulekile kwikhamera yangaphambili ngokusho kukaKuo
Por U-Alex Vicente kwenza Amaviki angu-4 .
Amahemuhemu mayelana nentuthuko yekhamera ezolethwa i-iPhone 14 abelokhu ehlala njalo ezinyangeni ezedlule…
Izithombe zokuqala zokwakheka kwe-iPhone 14 elandelayo ziyahlungwa
Por U-Angel Gonzalez kwenza Amaviki angu-4 .
Amahemuhemu aqala ukuba namandla futhi akhukhule amanethiwekhi omphakathi ezinsukwini zakamuva. Ngakolunye uhlangothi, sine…
I-iPhone 14: Amahemuhemu amasha akhomba ukuncishiswa kwamafreyimu.
Por U-Alex Vicente kwenza Inyanga e-1 .
Ngokusho kwamahemuhemu amasha asekelwe ku-AutoCAD enikeziwe ebingaputshuzwa, i-iPhone 14, kumodeli yayo ye-Pro Max ...
Ama-iPhone ane-Touch ID ngaphansi kwesikrini azobambezeleka iminyaka embalwa
I-iPhone 14 izobona ukukhanya ngoSepthemba olandelayo. Yize kusenezinyanga eziningi ezizayo, amahlebezi…
I-iPhone 14 ingena esigabeni sokuqinisekisa ubunjiniyela, ikhamera ye-periscope ibambezelekile ku-iPhone 15
Por UKarim Hmeidan kwenza Izinyanga ze-2 .
Sisesigabeni sokuqala sika-2022 kodwa usuyazi ukuthi isikhathi samahemuhemu sokuthi…
Amakhamera we-iPhone 14 Pro azoba mkhulu uma esebenzisa ama-megapixel angama-48
Kubukeka sengathi ukufika kwama-megapixel angama-48 kumamodeli amasha we-iPhone 14 Pro kuzongeza ukujiya okwengeziwe ...
Imidwebo ye-iPhone 14 Pro ikhombisa ukuthi iyajiya
Izinhlelo ezisolwayo ezinezilinganiso zangaphandle ze-iPhone 14 Pro zisanda kuputshuzwa. Uma le midwebo ingokoqobo,…
Isizukulwane sesithathu se-iPhone SE sifika nebhethri elikhudlwana nemodemu entsha
Abaningi bayayigxeka kodwa inabalandeli bayo, isizukulwane sesithathu i-iPhone SE yafika ngoMashi 8 ukuze…
Ukuxhumana kwe-5G kwephula amarekhodi ngenxa ye-iPhone 13
Impela ucabanga ukuthi i-iPhone ibingeyokugcina ukusebenzisa ubuchwepheshe be-5G kumadivayisi ayo kanye…
Isebenza kanjani i-Dual SIM ye-iPhone XS neXS Max entsha
Ungazilanda kanjani izinhlelo zokusebenza nge-iPhone X
Yonke imigilingwane ye-iPhone X yokuthola okuningi kuyo
Ungayibona kanjani iphesenti lebhethri ku-iPhone X
Izinkinga ezi-10 ezivamile ku-iPhone 6 nokuthi ungaxazulula kanjani
IPhone ngaphandle kwensizakalo? Zama lezi zixazululo
IPhone 6 vs. I-iPhone 7: ukuhlaziywa kwevidiyo ngokungafani kwabo
Ngabe i-iOS 10 ingafakwa kuma-iPhone 4s? Futhi ku-iPhone 5?
Umehluko phakathi kwe-iPhone 5s ne-iPhone SE
Ungayisika kanjani i-SIM khadi ukuze iphenduke i-micro SIM noma i-nano SIM